Samsung akwadebela mmelite nke TouchWiz maka August | Gam akporosis
Na LG G5 anyị enweela ohere gaa kpamkpam site na drawer ngwa. Eeh, oghere ahụ anyị na - aga na gam akporo oge niile iji gbakwunye akụrụngwa anyị ibudatara na desktọọpụ. Ọ bụ ezie na LG kpochapụrụ ohere a, o mechara kpebie ịgbakwunye ihe ọzọ ka ndị ọrụ wee nwee ike ịnweta drawer a ma ọ bụrụ na ha chọrọ, ọ bụ ezie na na ndabara na G5 ọ na-abịa na-enweghị drọwa.
Ugbu a bụkwa mgbe Samsung sonyere omume a na android iji nwalee ya na “Galaxy Beta Mmemme» a mmeghari ohuru na interface nke a na-akpọ dị ka «New Cheta UX» na Galaxy Cheta 5. Nnukwu ogo nke ntaghari ohuru a bụ ichefu banyere drawer ngwa ahụ yana ndị ọrụ na-enwekarị ngwa ha niile na desktọọpụ. Nnukwu ihe dị mkpa folda na-ewere, ebe ọ bụ na ọ bụghị mmadụ niile nwere mmasị ịnweta ọtụtụ nseta na desktọọpụ.
N'ime ihe ọhụrụ dị na "New Note UX" nke Galaxy Note 5, anyị nwere ike ịchọta akara ngosi ngwa ngwa gụnyere igodo ozi na ozi ejirila agba ọhụrụ. Akara ngosi nwere a mechie udi odidi na ngalaba ngosi na-enwetakwa ọnụọgụ dị mma nke nhọrọ iji rụọ ọrụ. Ọzọ nke oghere ebe Samsung ka ọhụrụ imewe bụ na ntọala menu.
A ga-etinye interface interface UX ọhụrụ a Galaxy S7, S7 Edge, S6, S6 Edge na S6 Edge Gụnyere. Ebe nrụọrụ weebụ ebe a na-ewe ozi ọma na-akọkwa na a ga-etinye interface ọhụrụ na ngwaọrụ ndị a n'oge okpomọkụ a, kpọmkwem n'ọnwa August. Ihe omume a di ugbua ka ịhọrọ ndi oru 5 na China na South Korea.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung nwalere interface ọhụrụ maka TouchWiz na "Galaxy Beta Mmemme"
Yiri nnọọ ka EMUI nke Huawei, m na-ekwu na mkpofu ahihia?
Zaghachi Gustavo Alvarado
Huawei kwupụtara Honor 5A na 5,5 "HD ihuenyo na batrị 3.100 mAh